रणबीरको सञ्जुले तोड्नेभयो सलमानको यो रेकर्ड, कति कमायो चलचित्रले ?
संजय दत्तको बायोपिक चलचित्र सञ्जुले बक्सअफिसमा रेकर्ड तोड्नेक्रम जारी छ । चलचित्र छैटौं टप बलिउड चलचित्र बनिसकेको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शका अनुसार चलचित्रले भारतको बजारबाट मात्रै १६ जुलाईसम्म ३१६ करोड कलेक्शन गरेको छ । ग्रस कलेक्शनको मामलामा यो चलचित्र सलमान खानको चलचित्र बजरंगी भाईजान भन्दा थोरै मात्र पछाडि रहेको छ ।
सलमानको बजरंगी भाईजानले प्रदर्शन अवधिभर ३२० करोड ग्रस कलेक्शन गरेको थियो । ३२० करोड कलेक्शनसहित बलिउड टप ५ मा रहेको बजरंगी भाईजानको रेकर्ड सञ्जुले यसै हप्ता ब्रेक गर्ने निश्चत छ । योसँगै उच्च कलेक्शन गर्ने टप ५ चलचित्रमा सलमानको चलचित्र नरहने भएको छ । बक्शअफिसका राजा मानिएका सलमानलाई यो खबरले झड्का लाग्ने निश्चित छ । यता लगातार चलचित्र असफल भएर करियर नै धरमराएका रयावीर कपूरलाई सञ्जुले निकै राहत दिएको छ ।
सञ्जुले सलमानमात्र नभएर आमिर खानका चलचित्रलाई पनि पछि पार्ने सम्भावना रहेको छ । आमिर खानको चलचित्र पीके र दंगलले भारतिय बक्शअफिसमा ३४० करोड कलेकशन गरेका थिए । पहिलो स्थानमा रहेको बाहुवली २ ले भने भारतिय बक्शअफिसमा ५१० करोड कलेक्शन गर्न सफल भएको थियो ।
चितवनमा दुधको मूल्य घटाएको विरोधमा दूध पोखेर प्रदर्शन
डा. केसीको समर्थनमा राजनितिक दलका नेता देखि पूर्व न्यायाधिस र कलाकार सम्म सडकमा
‘मिस्टर भर्जिन’को आइटम गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)